Ifektri yengubo-China ingubo yabenzi, abaxhasi
Sihlala siqhubeka nomoya wethu '' woQinisekiso oluzisa uphuhliso, Umgangatho ophezulu kakhulu uqinisekisa ukuziphilisa, uLawulo olukhuthaza inzuzo, Ityala lokutsala abathengi ngengubo,,,, Siyabamkela abathengi abatsha nabadala ukuba banxibelelane nathi ngomnxeba okanye basithumelele imibuzo ngeposi ubudlelwane beshishini bexesha elizayo kunye nokufikelela kwimpumelelo efanayo. Sisebenzisa inkqubo epheleleyo yesayensi yolawulo oluphezulu, umgangatho ophezulu kunye nokholo oluphezulu, sifumana igama elihle kwaye sihlala kolu shishino ngengubo, Inkampani yethu iya kubambelela "kuMgangatho wokuqala,, ukugqibelela ngonaphakade, okujolise ebantwini, kubuchwephesha bokuyila" kwifilosofi yeshishini. Umsebenzi onzima wokuqhubeka nokwenza inkqubela phambili, kwishishini, yenza zonke iinzame kumashishini okuqala. Sizama konke okusemandleni ethu ukwakha imodeli yolawulo lwenzululwazi, ukufunda ulwazi oluninzi lobuchwephesha, ukuphuhlisa izixhobo zemveliso eziphambili kunye nenkqubo yokuvelisa, ukwenza imveliso yeefowuni zokuqala, ixabiso elifanelekileyo, umgangatho ophezulu wenkonzo, ukuhanjiswa ngokukhawuleza, ukukunika ixabiso elitsha.
Ivesti yomntu edibeneyo
Le yangaphantsi inamadoda.Ikhola ephezulu kunye nelaphu eyahlukileyo yokuthungwa kunye neengxowa ezininzi.
Le ndlela ilula kwaye intle. Uyilo lulungele amanenekazi. Iimpawu zemveliso zenza ukuzaliswa okukhethekileyo (iDuPont Sorona)
Izinto eziluncedo zokugcwalisa
Isalathiso sokuqina: i-ultra-thin, ubukhulu obuqhelekileyo
Isalathiso se-elastic: i-inelastic micro elastic super-elastic
Ilungele amaxesha onyaka: Intwasahlobo, ihlobo, ukwindla nasebusika
Ibhatyi ebhinqileyo ebhinqileyo
Ijacket ebiyelweyo eDupont yamaLadies
Le ndlela ilula kwaye intle. Olu luyilo lufanelekile kubafazi.Iimpawu zeMveliso zenziwe ngokuzaliswa okukhethekileyo (iDuPont Sonora), kushushu ngakumbi kwaye kukhaphukhaphu kunejacket yokugcwalisa eqhelekileyo.
Indoda Nentombazana enePhedi
Olu hlobo lufudumele kwaye luhle. Uyilo lufanelekile kumadoda nakwabafazi.Uyilo lushushu kwaye linoboya obuninzi bobuxoki.Yimveliso ekumgangatho ophezulu. Ithunyelwe kumazwe amaninzi kwihlabathi liphela.Le ndlela yentengiso iphambili yiYurophu kunye nenyakatho yeYurophu.
I-Corduroy Vest yamaLadies
Olu hlobo lusampulu kwaye lubukeka.
Ukwahluka kwefashoni yokuLuka iVesti yamaLadies
Olu hlobo lusampulu kwaye luhle .Le vesti ziindidi ezimbini zokuthungwa kwelaphu .Yivesti edibeneyo kunye nefashoni.
Iilaphu ezahlukileyo zokuLuka iJacket yamaLadies
Olu hlobo lweentlobo ezimbini zokuthungwa kwelaphu .Kulunge kakhulu; ithambile; ukukhanya. Umbala woboya begusha kunye nelaphu le-polyester ziyafana.
Imikhono eSusayo kunye neHood Jacket yaBantwana namaLadies
Olu hlobo lubini ezimbini. Uyilo lufanelekile kubo bobabini abantwana kunye namanenekazi.Uyilo lususa ihood kunye nemikhono ngeyiloni zipper.Thabatha imikhono, inokutshintshwa ivesti.
Ibhatyi yangaphandle yomfazi eneHood
Le ndlela ilula kwaye intle. Olu luyilo lulungele amadoda nabafazi.Uyilo lususa isigqubuthelo nge-nylon zipper, inepokotho yesifuba kunye nepokotho engezantsi nge-nylon zipper.